warkii.com » Akhriso: Axmed Madoobe oo shaaciyay in laga heshiiyay Khilaafkii kala dhaxeeyay DF
Akhriso: Axmed Madoobe oo shaaciyay in laga heshiiyay Khilaafkii kala dhaxeeyay DF
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in is afgarad buuxa laga gaaray khilaafkii kala dhaxeeyay Maamulkiisa Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo ka dhashay doorashadii uu kusoo baxay ee ka dhacday Kismaayo.
Waxaa uu sheegay in wada-hadallo hoose oo maalmihi la soo dhaafay dhex-maray madaxda Sare ee Dowladda Federaalka & Dowlad Goboleedyada ee ku wada sugan Dhuusamareeb si hoose wax loo xeeriyay,isla markaana tanaasul farabadan las ameeyay.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa u mahada celiyay Madaxweyne Farmaajo oo uu sheegay in uu suurtageliyay qabsoomida Shirka Dhuusamareeb iyo in xal laga gaaro khilaafkii u dhaxeeyay Madaxda Dowladda & Dowlad Goboleedyada.
Madaxtooyada Soomaaliya iyo Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa bilihii la soo dhaafay ka dhaxeeyay khlaaf ka dhashay doorashadii lagu qabtay Kismaayo,waxaana taasi ay sababtay in dowladda ay cunaqabateyn saarto Magalada sidoo kale Ciidamo ay geyso degmooyinka Gobolka Gedo kalana wareegto Ciidamada Jubbaland oo ku sugnaa.
Hadalka Madaxweynaha Maamulka Jubbaland ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu dhankiisa Shirka Dhuusamareeb ka sheegay in xal laga garaay khilaafkii kala dhaxeeyay Dowladda Soomaaliya.